Sida loo sameeyo ringtones caadadii la ringtone barnaamijyadooda magaabay / editor
Ringtones waxa weeye sida weyn ay u astaysto fursadaha audio aad aad casriga ah, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin waqti fiican. Waxa kaliya ee ka fiican tahay in loo kartoo ringtone, si gaar ah ka dhigay ku haboon baahida iyo dhegihiinna aad. In hawlgalkan, magaabay ringtone iyo barnaamijyadooda editor waxaa ka mid ah kaalmo weyn. Oo iyaga waxaa la diinta mp3 si ringtones waa u fududahay. Waxaa jira jaraya ringtone badan iyo tafatirayaasha lacag la'aan ah download, laakiin tiro yar oo kaliya ayaa loo aqoonsan yahay. Kuwan qalab waxtar leh, qof kasta oo ka dhigi kartaa ringtone ah, caadadii ka dhigtay in ay ku habboon baahida shakhsi ahaaneed. Haddii qof uu rabo inuu maqli soundtracks yar oo isku xigta, in la samayn karo tafatirka. Haddii qof doonayo inuu ka horjoogsanaya in ay qeybo ka mid ah madaxdii gabayga oo uu ka heli caajiso ama aan soo jiidasho leh, jarida codsiyada maamuli doonaa in.
Waxaa jira wayn oo ka mid ah barnaamijyada iyo codsiyada sababtan aawadeed, haddii aad u doondoonaya inay samaynayaan aad PC ama casriga ah. Laakiin mid iyaga ka mid ah u taagnayd waa Wondershare Stream Record Audio. Codsigan ayaa diyaar u ah Windows iyo Mac bixisaa badan oo fursadaha in dadka isticmaala ay. Waa sahal in la soo dejisan, waxay isticmaalaan iyo badbaadin, hubaashii waa codsi ugu fiican marka loo baahan yahay goynta ringtone iyo tafatirka. Ee ah kuwa u baahan tahay xoogaa gargaar ah, oo waxa uu xitaa waxay bixisaa Casharrada video, sidaa darteed marnaba ma lumen karaa iyadoo la isticmaalayo barnaamijkan.
Qeybta 1: Best Ringtone magaabay / Editor: Wondershare Stream Record Audio
Qeybta 2: Options More: 3 kale Ringtone jaraya / Editors
Best Ringtone magaabay / Editor: Wondershare Stream Record Audio
Audio Record ka durduri wax online. An software duubista cusub oo kuu ogolaanaya in aad diiwaan geliso wixii sorce audio digital.
Easy-mid-riix duubo smart kuu ogolaanayaa inaad diyaarinta liiska music geeyo online iyo ciyaaro. Haddaba waxay ahayd marnaba si fudud!
Shakhsiyeeyo diiwaankaaga, dib u soo ceshano xogta ah ee kuwan raadkaygay diiwaan la taariikhqorihii Audio ah.
Abuure ringtone Smart - ringtones Iyada oo ka song jecel yahay hadda waa yar-qasabno fudud.
Duubista Tayada wuxuu qaadanayaa kaadhka codka qaybiyay u duubo iyo ilaaliyaa tayo sare leh.
La jaan qaada goobaha caanka ah, si aad hadda qabsan kartaa music ka Youtube, BBC Radio iyo qaar badan.
Sida loo sameeyo Custom Ringtone la Wondershare Stream Record Audio?
Sharax in tallaabooyinka fudud ee yar!
- Download Wondershare Stream Record Audio, oo waxaa la samayn karaa website-keeda.
- Dooro folder drive meesha aad rabto in aad rakibto Barnaamijka ka.
- Riix badhanka rakib.
Ka dib marka aad dhamayso soo dajinta iyo rakibidda, duubo waa tallaabada xigta. Si record, internet ayaa loo baahan yahay:
- Soo qaado saldhigga radio online jecel yahay ama music Youtube oo ha ciyaaro.
- Open Wondershare Streaming Record Audio
- Hit button REC ku geeska bidix ee sare ee daaqadda.
Ka dib markii aad dhameyso leh u dhegeysanaya, si fudud riix badhanka isla REC si ay u joojiyaan qoro. Your file si toos ah la badbaadin doonaa, oo aad awoodo si aad u aragto in aad maktabadda. Laga soo bilaabo halkan, waxa aad edit karaa oo waxaad ka samaysaa ringtones caado ka dhigtay.
Ka hor inta aadan sii wadin tafatirka, dooro track hore aad duubay. Dhammaan kuwan raadkaygay laga heli karaa Bartan "Dhammaan cajalado" ah.
Si aad u billowdo sixiddiisa ringtone, xaq-riix aad mouse ka badan track ee la doortay, kadibna riix "Samee ringtone". Waxaad geli karaa tafatirka sidoo kale kaliya oo riixaya icon dawan in loo arki karaa wadada aad dooratay ee. Ka dib markii aad soo gashay doorasho tafatirka, suuqa kala yar furi doonaa hoos yimaada oo dhan kuwan raadkaygay. In halkan, aad xaalkaa kartaa adoo dejista Start iyo Dhamaadka ringtone ah.
Lacag ringtone cusub
Save ringtone la badhanka "Save" aad ka heli karto hoos ku qoran ee muunada ah. Sidoo kale, ka hor inta aanad dooran oo u badbaadin doonaa, aad ku eegaan karo. Sidaas, waxaad yaqiinsanaysaa aad sameeyey wax sax ah. Lacag ikhtiyaar aad bixisaa laba doorasho: mp3 ama file m4r, waxayna ku xiran tahay barnaamijka hawlgalka aad casriga ah.
Talaabada xikta waa transfering faylka si aad casriga ah, haddii ay tahay Androif ama macruufka. Wixii kuwa casriga ah Android:
- Dhinaca bidix, riix batoonka Menu "Ringtone".
- Gala iyo xaq-riix file aad rabto in lagu wareejiyo
- Press "Open ee folder"
- Ka dib markii folder la furay, dooro file iyo wareejiso smartphone Android.
Kuwa la iPhone, waxaa jira icon yar hoose ee barnaamijka. Guji "Transfer in Lugood" si ay u soo dirto ringtone loo doortay in ay aad iPhone.
Ka dib markii ay suuqa kala iibsiga la sameeyo, waxaan u leeyihiin in ay qarka u saaran ringtone ee goobaha telefoonka. On goobaha casriga ah, geli "profile Audio" goobaha, ay doortaan ringtone ah oo ay doortaan.
Wixii doorashooyin ka badan, waxaan jeclaan lahaa in aan soo saarno 3 ringtone tifaftirayaasha kale oo loo isticmaali karo ee casriga ah aad iyo sidoo kale.
1. MP3 magaabay iyo Ringtone Kan sameeyey,
URL Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atomic.apps.ringtone.cutter&hl=hr
Codsigan ogolaado in aad jaray dhammaan qaybaha ay ka heeso aad jeceshahay doonaa. Samaynta MP3 ringtones hadda waa ka dhaqso badan abid. Duubo Live iyo ogeysiis abuure midab yihiin qaar ka mid ah qaababka codsigan oo lacag la'aan ah siisaa dadka isticmaala ay. Taageeridda badan oo qaabab music ah, tani waxaa la "waa in uu leeyahay" qalab samaynta ringtones shakhsi.
- badhanka record ee bidixda ah ee kore ee app si ay u qoraan maqal / music for tafatirka.
- ah rogay Red Xagalka in Dooro iyo Edit Mp3 / Music ka Mobile / SD.
- Xulashada in ay tirtirto (la heegan xaqiijin) ohyahay abuuray.
- View ah wakiil waveform scrollable ee file maqal ah heerar 4 zoom.
- Set bilaabi & soo afjaro u clip ka maqal ah, iyadoo la isticmaalayo ah interface xiriiri optional.
- Gacanta dhigay Start & Dhamaadka waqtiga (ee seconds) by khaanada qiimaha sanduuqyada text hoose ee app.
- Xulashada magaca jaro clip cusub iyadoo lagu badbaadinayo.
- Calan clip cusub sida default ringtone ama u yeelaan xiriirada, iyadoo la isticmaalayo editor this.
· Codsiga waa fududahay in la isticmaalo
· User saaxiibtinimo
· Bandhigay Great
· Dhagaysi ka hor inta naftu aan la heli karin
2. MP3 magaabay
URL Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=mp3.cutter.ringtone.maker.trimmer
Mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan ee xaalkaa files music hab fudud oo fudud. Codsiga waxa kale oo uu leeyahay feature ah in kuu ogolaanayaa inaad isku daro 2 audio files, si aad u yeelan karaan musics aad jeceshahay in hal meel. Naqshadaynta waa wax fudud oo ku haboon dadka isticmaala kasta u baahan tahay.
- Liiska kuqor Dhammaan gabayadii MP3 ka card SD ah.
- Dooro MP3 faylasha ka mid ah liiska.
- file gooya isticmaalaya Weeraryahanka iyo xulista u socdeen.
- Waxaad badbaadin karo faylka si card SD.
- Calan faylka saxar sida giraan midab .
· Isku files
· Bandhigay Simple iyo hal abuur leh
· Wuxuu bixiyaa badan oo fursadaha
· Tayada music wuxuu noqon karaa mid ka fiican
URL Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herman.ringtone
Kan sameeyey Ringtone waa codsi lacag la'aan ah oo abuuri ringtone, digniinta, iyo farriimaha ka MP3, regelingen, AAC / MP4, 3GPP / Amr files. Waxaad sameyn kartaa bilowga iyo qoraalada soo afjaridda by fallaadho saraysa oo ay la socdaan waqtiga, adigoo riixaya Start iyo End si ay u qoraan barta, ama adigoo garaacaya ereyada ee stamps mar. Codsiga Bilaashka ah ee la abuurayo ringtones, digniinta iyo xitaa wargelinta ka dhan files. Tani waa mid ka mid ah codsiyada in aad siinaysaa kartida badan, sida ka baxeysa gudaha / dibedda, qabsado mugga aad file, koobiyeynta iyo dhajinta iyo wax badan oo dheeraad ah. Waxaad ku eegaan kartaa ringtone, ka dibna ku wareejinayso qaar ka mid ah xiriirada aad!
- Copy, gooyay iyo Jinka.
- libdhi gudaha / dibedda u mp3.
- Dheellitir mugga u mp3.
- Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh files Ringtone iyo yeelaan inaad la xiriirto.
- Qor clip cusub oo maqal ah in wax ka bedel.
- si toos ah dhig ka Ringtone a si xiriir ah , waxa kale oo aad dib-u-wareejin kartid ama tirtirto Ringtone ka xiriir.
- Sort by Tracks, Qaasaali, Artists.
- Maamul xiriir Ringtone.
· Luudh ah muuqaalada
· Easy in ay isticmaalaan
· Fursadaha keydinta faahfaasan
· maqan doorasho si ay u dejiyaan ringtone koox ka mid ah xiriirada
Maanta tafatirka Great iyo qalab jarida waxaa laga heli karaa, laakiin wax yar oo ka mid ah taagan. Helitaanka barnaamijka saxda ah ama codsi ku haboon baahida marna waa fudud, sidaas hor inta uusan go'aan kama dambays ah, waxaa fiican in ay isku dayaan oo dhan oo iyaga ka mid ah si loo hubiyo annaga oo aan ku dhuftay mid ka mid qaldan.
> Resource > Apps > Sida loo sameeyo Custom Ringtones la Ringtone magaabay / Editor Apps?